Izinzuzo ze-Baking Soda Yesikhumba Sakho - Isikhumba
Izinzuzo ezi-10 eziphezulu ze-Baking Soda zesikhumba sakho
Isoda yokubhaka iyisithako sasekhishini esisetshenziselwa ukwenza uphudingi nokunye okuphatha ama-yummy. Kepha akusikho konke lokho okwenzayo, sikunikeza izizathu eziyi-10 zokubeka i-baking soda kwikhabethe lakho lobuhle njengoba lingenza izimangaliso zesikhumba sakho. Ukusuka ekunqandeni induna ekugcineni izinyawo zakho zijabule, futhi kusukela ekususeni iphunga lomzimba kuya ekunciphiseni amabala, yingakho ukubhaka isoda kuyikhambi lasekhaya okufanele ube nalo. Sabelana ngeziningana izinzuzo zokubhaka isoda ngesikhumba nendlela efanele yokuyisebenzisa ukuthuthukisa i- ubuhle .
1. Izinzuzo ze-Baking Soda yesikhumba esikhanyayo
ezimbili. I-Baking Soda Yokuvimbela Izinduna
3. I-Baking Soda Yokukhanyisa Amabala Amnyama
Isine. I-Baking Soda Yokuvimbela Ama-Blackheads
5. I-Baking Soda Yokususa Amaseli Esikhumba Afile
6. Ukubhaka Isoda Ngezindebe Ezithambile, Eziphinki
7. Ukubhaka i-Soda yama-Elbows amnyama namaDolo
8. I-Baking Soda yokususwa kwezinwele ze-Ingrown
9. Isoda yokubhaka yokuqeda iphunga lomzimba
10. I-Bakoda Soda Yezinyawo Ezithambile
ishumi nanye. Imibuzo evame ukubuzwa
Izinzuzo ze-Baking Soda yesikhumba esikhanyayo
Isikhumba esikhanyayo siyisibonakaliso sesikhumba esinempilo, sobusha futhi akulula ukusizuza. Ngaphandle kokuthi udle ukudla okunempilo, yiba neqiniso inqubo yokunakekelwa kwesikhumba nokulala amahora ayisishiyagalombili, ukwengeza ukukhanya esikhunjeni sakho akulula. Kodwa-ke, izithako zemvelo ezigcwele izakhamzimba ezibalulekile zingakusiza. Thina sebenzisa i-baking soda nejusi lewolintshi ukwenza leli phakethe nezinto zalo kusize ukukhulisa i-collagen yesikhumba nokususa ukungcola. Amawolintshi agcwele uvithamini C lokho kufaka ukukhanya kwemvelo esikhumbeni sakho ngenkathi i-baking soda ikhipha ngobumnene isikhumba isuse ungqimba lwamaseli esikhumba afile .
Hlanganisa isipuni esisodwa se-baking soda nesilinganiso esiphindwe kabili senani le-orange elisha.
Manje ngokulinganayo faka ungqimba omncane walokhu kunamathisela ebusweni nasentanyeni yakho.
Qiniseka ukuthi ugeza ubuso bakho ngaphambi kokwenza lokhu.
Yiyeke yome cishe imizuzu eyi-15.
Usebenzisa iphedi likakotini olumanzi, usule bese ufafaza amanzi apholile ukuze ususe noma yiziphi izinsalela.
Sebenzisa leli phakethe kanye ngesonto ukuze ususe ubuthuntu bese ungeza lokho kukhanya okudingeka kakhulu esikhunjeni sakho.
I-Baking Soda Yokuvimbela Izinduna
Ukukhishwa okuncane impahla yesoda yokubhaka kwenza kube isithako esihle kakhulu sokusiza ukuxosha izinduna nezinduna esikhunjeni sakho. Kuphephile ukuthi ungasetshenziswa nasebusweni ngemuva kokuhlanjululwa ngamanzi. Isoda yokubhaka iyasiza yomisa induna nempahla yayo elwa namagciwane kusiza ukuvimbela ukuqhuma okuqhubekayo esikhunjeni sakho. Uma unayo induna esebenzayo , zama leli khambi kepha uma isikhumba sakho siphendula, yeka ukusetshenziswa.
Thatha isipuni esisodwa sesoda bese uyixuba namanzi alinganayo ukwenza inamathisela.
Hlanza isikhumba sakho ngokugeza ubuso bese usebenzisa lokhu i-baking soda unama ku-acne.
Ungayisebenzisa futhi kuma-blackheads naku-whiteheads.
Yishiye imizuzu emibili nantathu bese ugeza ubuso bakho ngamanzi afudumele.
Njengoba lokhu kuvula izimbotshana zakho, gcoba ngobumnene i iqhwa ebusweni bakho noma faka i-toner ukuwavala futhi usule isikhumba sakho.
Uma isikhumba sakho sizwa somile kancane, sebenzisa i-moisturizer elula bese uqinisekisa ukuthi ayi-comedogenic okusho ukuthi ngeke ivale ama-pores akho.
Sebenzisa lokhu kunamathisela kabili ngesonto ukubona ukwehla okubonakalayo ekubukeni kwezinduna.
I-Baking Soda Yokukhanyisa Amabala Amnyama
Ngabe izisihla namabala esikhunjeni sakho? Isoda yokubhaka ingakusiza ukuze ubakhanyisele. Lokhu kungenxa yokuthi i-baking soda inezindawo zokukhipha ibala ezisiza ekuqedeni amamaki namabala esikhunjeni. Kepha ngoba usebenzisa i-baking soda njengoba injalo ingaba nokhahlo, siyixuba nesinye isithako semvelo ukuyenza ilungele ukusetshenziswa kwesikhumba. Kulokhu, sifaka ijusi kalamula okungelinye i-ejenti yemvelo yokufaka amakhandlela.
Endishini, engeza ithisipuni elilodwa le-baking soda bese ucindezela ijusi lengxenye kalamula kuyo.
Hlanganisa lokhu okubili ukuze uthole ukunamathisela okujiyile. Manje ebusweni obuhlanzekile nobumanzi kancane, sebenzisa le ngxube.
Ungaqala uhlanganise izisihla namamaki bese usebenzisa okusele ukufaka izicelo ezindaweni ezisele.
Yishiye imizuzu embalwa bese ugeza ukugeza kwakho kuqala ngamanzi afudumele futhi kamuva nge-splash ebandayo.
Pat sula isikhumba bese ugcoba isithambisi nge-SPF.
Kungcono ukufaka lokhu ebusuku njengoba ukutholakala kwelanga ngemuva kokusebenzisa ijusi likalamula kungasenza isikhumba sakho sibe mnyama.
Sebenzisa lokhu kanye noma kabili ngeviki ukubona izinguquko ezibonakalayo.
I-Baking Soda Yokuvimbela Ama-Blackheads
Uma unayo isikhumba esinamafutha , amathuba okuba, ijwayele ukuba nezinduna namakhanda amnyama avame ukuvela ebusweni bakho. Futhi uma unezimbotshana ezinkulu, ukuvela kwalezi zinkinga kuphakama kakhulu, okwenza ubuso bakho bubukeke bungcolile. Isoda yokubhaka ingasiza nciphisa lolu daba ngokuvala izimbotshana zesikhumba sakho futhi uzinciphise kancane ngokubukeka. Lesi sithako sinezinto ezinjenge-astringent ezisiza ukuvala ama-pores nokuwavimbela ekuvalaneni nenhlabathi ebangela amakhanda amnyama kanye nezinduna. Nakhu okudingeka ukwenze.
Thatha isipuni esisodwa se-baking soda bese usifaka ebhodleleni le-spray.
Manje yigcwalise ngamanzi bese uyinyakazisa kahle ukuxuba lokhu okubili.
Geza ubuso bakho ngesihlanza bese usula ngethawula, bese ufafaza ikhambi ebusweni bakho bese ulishiya livuleke ukuze isikhumba sakho lisicwilise.
Lokhu kuzosiza ukuvala izimbotshana. Isixazululo ungasigcina esiqandisini ukuze sisebenze kangcono kakhulu.
Yenza lokhu kube yingxenye yenkambiso yakho yansuku zonke yokuhlanza ukuvimbela omaye besikhumba. Ungafaka amafutha okuthambisa ubuso bakho ngemuva kokusebenzisa le toner yemvelo.
I-Baking Soda Yokususa Amaseli Esikhumba Afile
Ukungcola, ukungcola, ukungcola kuvame ukuhlala esikhunjeni sethu futhi akuveli ngaso sonke isikhathi ngokugeza ubuso kwethu njalo. Ukususa lezi zinhlayiya ezincane zothuli, sidinga isihlanzeli esisebenza kangcono esihlanza izimbotshana futhi sisuse lokhu kungcola. Isikhuhla sobuso siza kahle kulomaye wesikhumba onjalo. Isoda yokubhaka isiza ukukhipha isikhumba ngaphandle esusa amangqamuzana esikhumba afile kanye nalokhu kungcola.
Thatha isipuni esisodwa sesoda nesipuni samanzi uhhafu.
Umqondo wukwenza unamathisela ojiyile nosawoti ukuze ukwazi ukukhipha isikhumba ngaphezulu ukuze uqiniseke ukuthi awuthanjiswa ngamanzi.
Ngemuva kokugeza ubuso bakho, gcoba lesi khuhla ngokunyakaza okuyindilinga, ugweme ngokucophelela indawo ezungeze amehlo.
Manje geza ngamanzi ajwayelekile bese usula ubuso bakho.
Faka amafutha okuthambisa ukuze uvikele umuzwa wesikhumba ocasukile.
Lesi sikhuhla kasifanele isikhumba esomile futhi esibucayi kepha sisebenza kahle kakhulu ku-oily to inhlanganisela yesikhumba thayipha.
Sebenzisa kanye ngesonto ukugcina isikhumba sakho sibukeka sisha.
Ukubhaka Isoda Ngezindebe Ezithambile, Eziphinki
Imikhuba engenampilo efana nokubhema, ukukhotha izindebe zakho ngisho nokugqoka izinduku ezihlala isikhathi eside kungalimaza izindebe zakho futhi kufiphaze umbala wazo. Ngenkathi iningi lethu linezindebe ezipinki ngokwemvelo, umthunzi uyashintsha lapho singazinakekeli ngokwanele. Ukuvezwa yilanga kungenye imbangela ye- izindebe ezimnyama . Uma ufuna ukubuyisa umbala wazo wemvelo, i-baking soda ingasiza. Siluxuba noju ukuze lungabi bukhali kakhulu esikhunjeni esibucayi futhi libuye lisenze lube mnandi ngenkathi kusenziwa.
Udinga inani elilinganayo le- isoda noju futhi njengoba kungenxa yezindebe, awudingi okungaphezu kwesipuni.
Uma izindebe zakho zomile kakhulu, engeza uju oluningi kunesoda.
Hlanganisa kahle yomibili bese uyifaka ezindebeni, uzihlikihle ngokunyakaza okuncane okuyindilinga.
Lokhu kuzosiza ukuzikhipha futhi kususe amangqamuzana esikhumba afile.
Uju luzosusa ukungcola futhi lungeze umswakama odingeka kakhulu.
Vumela leli phakethe lihlale ezindebeni imizuzu embalwa ngaphambi kokuthi uwageze ngamanzi afudumele.
Faka isicelo umuthi wezindebe ne-SPF ngemuva kwenqubo.
Ukubhaka i-Soda yama-Elbows amnyama namaDolo
Isikhumba esilungile asiwona isilinganiso sobuhle, kepha nabesifazane abahle kakhulu bavame ukuba nezindololwane namadolo amnyama. Uma lo mehluko kumbala wesikhumba ukukhathaza, ungawukhanyisa ngokusebenzisa leli phakethe. Sisebenzisa i-baking soda nejusi yamazambane , zombili zinezinto zemvelo zokukhipha amakhorali. Njengoba lezi zindawo zinesikhumba esijiyile kunobuso, noma ngubani angazisebenzisa ngokuphepha ngaphandle kokuthi zomile ngokweqile. Kepha sincoma ukusebenzisa isithambisi nge-SPF nsuku zonke ukugcina lezi zindawo zithambile.
Cwecwa amazambane amancane bese uwagcoba kahle.
Khama ujusi wayo endishini bese ufaka kuwo isipuni sesipuni sesoda.
Hlanganisa kahle bese usebenzisa ibhola likakotini, sebenzisa lesi sixazululo ezindololwaneni nasemadolweni.
Yishiye imizuzu engu-10 ukuze izithako zikwazi ukwenza umlingo wazo, bese ugeza ngaphansi kwamanzi agobhozayo.
Faka i-sunscreen ethambisa emva kokufaka isicelo.
Sebenzisa leli khambi kanye noma kabili ngesonto futhi ngokushesha isikhumba sakho sizobukeka sikhanya kakhulu.
Ungasebenzisa futhi lesi sixazululo emathangeni amnyama angaphakathi nasemakhwapheni.
I-Baking Soda yokususwa kwezinwele ze-Ingrown
Izinwele ezikhulile ezingaphakathi kuyisongo esinjalo njengoba kubonakala sengathi kunesigaxa esinzima esikhunjeni futhi siyenqaba ukuhamba kuze kube yilapho sithwathwa. Ingrowth empeleni yizinwele ezikhula ngaphakathi kwesikhumba sezinwele esikhundleni sokuhluma okwenza kube nzima ukukuqeda ngokujwayelekile izindlela zokususa izinwele njengokucheba nokucwilisa. Ngenkathi kunzima ukumisa ngokuphelele ukuvela kwezinwele ezingenile, ungasebenzisa i-baking soda nezinye izithako ezimbalwa ukuyisusa . Kakhulu, abesifazane abanokukhula kwezinwele ezijiyile noma uhlobo lwesikhumba olunamafutha bathambekele kakhulu ezinweleni ezingaphakathi.
Ukubhucungwa kokuqala u-Castor oil esikhunjeni sakho lapho unezinwele ezimile khona.
Lapho isikhumba simunca uwoyela, sula uketshezi olweqile usebenzisa iphedi likakotini elimanzi.
Manje hlanganisa i-baking soda nengxenye yobungako bamanzi ukwenza unamathisela obukhulu.
Gcoba lokhu endaweni ethintekile ukuyikhipha. Usebenzisa i-tweezer, khipha kalula izinwele ezifakiwe.
Faka iphedi kakotini ofakwe emanzini abandayo ukuvala izimbotshana.
Amafutha aqinisekisa ukuthi isikhumba sakho asomile futhi asicasukile, kuyilapho i-soda isiza ukukhulula izinwele ku-follicle.
Isoda yokubhaka yokuqeda iphunga lomzimba
Isoda yokubhaka inezici eziningana ezenza isithako esihle kangako. Uma ungumuntu ojuluka kakhulu futhi onenkinga yephunga lomzimba, i-baking soda ingakusiza . Lokhu kungenxa yokuthi inempahla elwa namagciwane ebulala amagciwane abangela iphunga. Isoda yokubhaka ibuye imunce umswakama owedlulele lapho ujuluka futhi ugcizelela umzimba wakho. Lokhu kusiza ekulawuleni hhayi kuphela iphunga lomzimba , kodwa futhi kwehlisa nomjuluko.
Thatha isipuni sesoda yokubhaka uyixube nezingxenye ezilinganayo ujusi kalamula osanda kufinywa.
Lapho usunamathisele aminyene, yisebenzise lapho ujuluka kakhulu njengezikhwama zangaphansi, emuva, entanyeni, njll.
Ake ihlale imizuzu eyi-15 bese ishaya ishawa. Futhi ungagcina lesi sixazululo ebhodleleni le-spray bese uliphiza kanye ngosuku ngaphambi kokugeza.
Kwenze lokhu isonto lonke bese wehlisela kuzo zonke ezinye izinsuku lapho ubona kusebenza.
I-Bakoda Soda Yezinyawo Ezithambile
Izinyawo zethu nazo ziyayidinga i-TLC ethile kepha imvamisa asizithambisi ngokwanele. Ukuze uzigcine zibukeka zizinhle futhi zizizwa zithambile, kudingeka sizinakekele njalo. Uma ungafuni ukuya ngezikhathi ezinhle kakhulu zokuhamba ngezinyawo e-salon, ungasebenzisa isoda yokubhaka ukuthambisa ucingo ngisho nokuhlanza izinzwani zakho. Impahla exfoliating isiza ukususa amaseli esikhumba afile nokuthambisa izinyawo zakho, kanti isenzo sayo sokulwa namagciwane sigcina ukutheleleka kutholakala.
Gcwalisa uhhafu webhakede ngamanzi afudumele bese ufaka kuwo izipuni ezintathu zesoda.
Ake ichithe bese ufaka izinyawo zakho kusixazululo imizuzu eyi-10.
Gcina itshe le-pumice eduze kwakho ongalisebenzisa ukukhipha isikhumba esifile emphefumulweni wakho.
Uma usuqedile, geza izinyawo zakho ngamanzi ajwayelekile bese uzisula zomile.
Bese ugcoba amafutha okuthambisa bese ufaka amasokisi ukuze zihlale zivikelekile.
Yenza lokhu okungenani kanye ezinsukwini eziyi-15 futhi izinyawo zakho zizokubonga ngakho.
U. Ingabe ukupheka i-soda ne-powder baking kuyefana ne-baking soda?
TO. Ngenkathi ukupheka isoda ne-baking soda kuyinto efanayo, igama nje liyahluka, ukwakheka kwamakhemikhali kwe- iphawuda wokubhaka ihlukile ekubhakeleni isoda. Lesi sakamuva sinamandla njengoba sine-pH ephezulu, okuholela ekukhuphukeni kwenhlama lapho isetshenziselwa ukubhaka. Uma ufaka ithisipuni le-powder yokubhaka nge-baking soda, uzodinga ithisipuni elilodwa kuphela lesine le-soda komphumela odingekayo.
U. Iyini imiphumela emibi ye-baking soda?
TO. Imiphumela emibi yokudla i-baking soda ngokweqile ifaka phakathi igesi , ukuqunjelwa nokuqunjelwa isisu. Uma usebenzisa izinhloso zobuhle, kuyalulekwa ukuthi uyisebenzise njengoba uyalelwe ngokuyixuba, ukuze ubukhali bayo bube buncane. Kodwa-ke, uma unesimo sesikhumba, kungcono ukuxhumana nodokotela wesikhumba ngaphambi kokuyisebenzisa ngokwezihloko.
U. Ungayenza kanjani imaski yobuso besoda yokubhaka?
TO. Sibonise eziningana izindlela zokusebenzisa i-baking soda ngenhla, kodwa esinye isifihla-buso sobuso esilula ongasenza usebenzisa lesi sithako ngokusixuba nobisi. Thatha isipuni sesoda nesipuni sobisi uhlanganise kahle. Uzoba noketshezi olugijimayo. Yigcobe ebusweni ngokulinganayo bese uyishiya imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuyigeza ngamanzi asivivi. Ungakhohlwa ukufaka i-sunscreen ethambisa ngemuva kwalokhu. Ungakusebenzisa kanye ngesonto ukuqeda ukungcola ebusweni bakho.
U. Ingabe ukubhaka isoda kulungile esikhunjeni esizwelayo?
TO. Isikhumba esibucayi iphendula ngokushesha okukhulu ngenxa yokwakheka kwayo. Isoda yokubhaka ingaba nzima kulolu hlobo lwesikhumba. Uma unesikhumba esibucayi, kufanele uvivinye ingalo engalweni ngaphambi kokufaka noma yiliphi iphakethe lobuso eliqukethe isoda. Uma kungekho ukucasuka noma ubomvu, ungayisebenzisa. Noma kunjalo, ungayisebenzisi kaningi kakhulu ngesonto ilungile.
Ungahle uthande ukufunda Ama-hacks ama-5 aguqula ubuhle asebenzisa i-baking soda
ishadi lokudla elifanele lokuzuza isisindo
izinzuzo zamafutha we-badam ngezinwele
ukumisa kanjani izinwele ukuwa ngamakhambi asekhaya
amathiphu amahle kakhulu wokukhula kwezinwele
ukuzivocavoca okuhle ukunciphisa isisu
susa izinwele ebusweni